Buy Water Tap (22,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ရေကောင်းရေသန်. ရရှိနိုင်ဖို. ဘေစင် ရေသန်. အကောင်းစားလေးကို
Rocket Online Shopping တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
filter ကလည်း အကြီးကြီး ဖြစ်တဲအတွက် ရေပို သန် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးခေါင်း အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ အတည့်ခေါင်းမှသာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – 22000 kyats
Filter အပို – 10000 kyats
ဈေးနှုန်း – 15000
အမည်: Water Tap